Accueil > Gazetin'ny nosy > OJM : Hanangana fikambanana mirazotra ny mpanao gazety
OJM : Hanangana fikambanana mirazotra ny mpanao gazety
Olona mirehareha fa mpandàla ny demôkrasia ary faran’izay sarotiny tamin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy na i Mama sôsy, kanefa ao anatin’ny fitantantany ny ministeran’ny serasera no misy fifidianana sôvietika (éléction à la soviétique) ny eo anivon’ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM). Nivoaka omaly mantsy ny lisitra ofisialin’ny kandidà amin’ny fifidianana ny birao maharitry ny OJM ka kandidà tokana ihany no hiady ny toeran’ny filoha, dia tsy iza izany fa ny mpanao gazetin’ny Radiom-pirenena malagasy (RNM), Monica Rasoloarison.
Izany no midika fa fifidianana sôvietika no handeha eo anivon’ny OJM, ny 16 oktobra ho avy izao. Fomba fanao tany amin’ireo firenena sôsialista niara-dia tamin’ny Firaisana Sôvietika tamin’ny fotoan’androny mantsy ny fifidianana tsy misy afa-tsy ny kandidà tokana, ary rehefa mivoaka ny voka-pifidianana dia lany amin’ny salan’isa 99%. Zavatra tahaka izany no ataon’ny minisitra Mama sôsy amin’ity fifidianana ny biraon’ny OJM ity, ka ny tanjona dia tsy inona fa ny afahany mifehy tanteraka ny olafitra. Marihana ihany fa tsy tongatonga ho azy izao fifidianana sôvietika eo anivon’ny OJM izao fa efa napetraky ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina daholo ny tetika maloto rehetra tany anatin’ny lalàna mamaritra ny fifidianana.
Tsy hankatoa an’io fifidianana amin’ny 16 oktobra io moa ny ankamaroan’ny mpanao gazety, indrindra fa ny tsy miankina, ary hanangana ny fikambanana mpanao gazety hafa. Izahay ato amin’ny La Gazette de la Grande Ile moa dia sady tsy mila karatra maha matihanina avy amin’ny OJM Freedom no tsy hankatoa ny olafitra vaovao hitsangana eo.